Madaxweyne Gaas oo Ka Mahad-celiyay Marti-Qaadkii Ugaas Maxamuud Sheekh – Radio Daljir
Madaxweyne Gaas oo Ka Mahad-celiyay Marti-Qaadkii Ugaas Maxamuud Sheekh
Seteembar 19, 2015 2:31 b 0
Sabti, September 19, 2015 (Daljir)_ Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa deegaanka Daarasalaam ee Gobalka Mudug kaga qeyb galay qado sharaf uu u sameeyey Ugaas Maxamuud Shiikh Cabdulqaadir Shoole.
Madaxweynaha iyo wefd balaaran oo uu hogaaminayey ayaa markii ay gaareen deegaankaasi waxaa si habsami leh u soo dhaweeyey Waxgarad, Isimo, Cuqaal, Haween iyo dhalinyaro watay calanka Puntland iyo caleemo qoyan.
Soo dhaweyn kadib ayuu madaxweynuhu waxaa uu deegaankaasi ku abuuray geedka Nabadda iyo Horumarka oo qeyb ka qaadanaya bilicda Deegaankaasi, waxaana uu sidoo kale dhagax dhigay Xarunta Booliska ee deegaanka Daara-salaam oo lagu dhisayo Barnaamijka isku tashiga Puntland.
Qado sharafta ayaa waxaa ka soo qeyb-galay Wasiiro, Xildhibaano, Isimo, Waxgarad, Cuqaal, Nabadoono, Dhalinyaro iyo masuuliyiin kale oo lagu martiqaaday qada sharafta uu Ugaas Maxamuud Shiikh Cabdulqaadir Shoole u sameeyey Madaxweyne Gaas.
Qadada kadib ayaa waxaa madasha khudbado kala duwan ka soo jeediyey dhammaan salaadiintii lagu casumay, waxaa ayna Madaxweynaha iyo xukuumadiisa ku amaaneen dadaalka horumarineed ee ay dalka kawadaan gaar ahaana Gobalka Mudug.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlay koobta ay qado sharaftu ka dhacday ayaa sheegay in meel wanaagsan ay marayaan mashaariicda horumarineed ee guud ahaa dalka ka socda , gaar ahaana Gobalka Mudug oo qaaday dhabada wanaaga iyo horumarka .
‘Waxaan rabaa inaan ka mahadnaqo taageerada loo muujinayo Barnaamijka horumarinta , runtiina wanaag badan ayey dadku noo muujiyeen , taageerada shacabka iyo isimadana waan ka mahadcelin ‘’ Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxweyne Gaas oo Muqdisho u tagaya Shir
Madaxweyne Gaas oo Gaalkacyo uga qayb-galay xaflad ay ku Qalin-jabinayeen arday ka baxday Jaamacadda Bariga Africa